Ọnọdụ ụlọ ọrụ Na 2021, ọnụ ahịa ịnyịnya eletrik mụbara opekata mpe atọ. Nke ahụ bụ bcz nke ọnụahịa nchara etolitere yana ihe ndị ọzọ. Ahịa anaghị akwụsi ike yana kwa ọnọdụ ụgbọ mmiri. Anyị Tianjin Shengtai International Trade Co., L ...
Ịgba ịnyịnya igwe n'okporo ụzọ bụ ọzụzụ egwuregwu okirikiri nke ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ, nke a na -eme n'okporo ụzọ awara awara. Ọsọ okporo ụzọ bụ ụdị ọkachamara ịgba ọsọ ịnyịnya ígwè kachasị ewu ewu, n'ihe banyere ọnụọgụ ndị asọmpi, ihe omume na ndị na -ekiri ya. Ụdị asọmpi asọmpi abụọ a na -ahụkarị bụ mmalite mmalite ...
site na nchịkwa na 20-07-09
Febụwarị 12 bụ afọ ọhụrụ ndị China, ụlọ ọrụ anyị ga -enwe ezumike otu ọnwa, n'oge a na -agaghị ahazi mmepụta ya. Ya mere, a ga -agbatị oge nnyefe ya. Biko hazie oge ịzụrụ ihe n'ụzọ ezi uche dị na ya iji zere nsogbu ọ bụla enweghị ike ịchịkwa. Dị ka ahụmịhe nke p ...